ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ? - এক সপ্তাহ ভাবুন
သင့်ကို ဘုရားသခင်ချစ်တော်မူ၏ !
Những đường link hữu ích và thông tin thêm
သင့်တစ်ပတ် အသက်တာ စဉ်းစားပါ။
এক সপ্তাহ ভাবুন Think about your life and future
လွန်ခဲ့သော နှစ်ရက်တုန်းက သက်ရှိသတ္တဝါများ ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းမရှိဘဲနဲ့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အတော်အသင့် သိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါစကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရော ဂြိုလ်များနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိသတ္တဝါများ ပါ အသေးစိတ် … ဒီဇိုင်းများအတွက် စီမံခန့်ခွဲပေးသော ဒီဇိုင်းနာ ရှိဖို့ လိုကို လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းနာရှိတယ် ဆိုရင် ထိုဒီဇိုင်းနာ ကကျယ်ဝန်းလှသော စကြဝဠာကြီးကို ဖန်ဆင်းပြီး၊ ဘာဖြစ်လိ့ုဂြိုလ်တစ်လုံးကိုသာ ရွေးချယ်၍အံ့မခန်းလောက်အောင် အဆင့်မြင့်သက်ရှိသတ္တဝါကို ဖန်ဆင်းထားသလဲ။ ဤအရာများ၏ နောက်ကွယ်၌ရှိသော ကြီးမားသော ရည်ရွယ်ချက်သည် ဘာများဖြစ်မလဲ။
မေးခွန်းအချို့ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဤဒီဇိုင်းနာက သူဖန်ဆင်းထားသော အရာများကို သူတို့၏ကံကြမ္မာအားလျှော်စွာ နေထိုင်ကြဖို့ လှစ်လျူရှုချန်ထားခဲ့မလား။ သို့မဟုတ် ဤဗိသုကာဆရာကြီးသည် သူဖန်ဆင်းထားသော အရာများကို ဆက်လက်ဂရုစိုက်သလား။ ထိုသို့ ဆိုရင် သင်ဘယ်လိုသိရှိနားလည်နိုင်သလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်သော ဂြိုလ်၌စိတ်ဆင်းရဲစရာ ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရှိနေသောကြောင့် ဖန်ဆင်းရှင်က သူဖန်ဆင်းထားသော အရာများကို ဆက်လက် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သည်ဟု စိတ်ကူးမှန်းဆရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ဘူးလား။
ဤဒီဇိုင်းနာသည် ချောမောစွာ အလုပ်လုပ်နေသော ဖန်ဆင်းထားသည့် “စက်ယန္တရား” ထက်သူသည် ဘယ်အရာ၌ စိတ်ပြင်းပြနေသလဲ။
ဖန်ဆင်းခြင်း၌ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခြင်း အပါအဝင်ဘာစီမံချက်ရှိမလဲ။ ဖန်ဆင်းထားသော အရာများသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သောသူ၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် တီတွင်ကြံဆနိုင်သောသူ များ အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ ထိုအရာသည် စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္တုရုပ်ရှင်ကားများ၌ အသက်ရှင်လှုပ်ရှားနိုင်သော စက်ရုပ်လူသားများ နှင့် အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်!
ထိုအချင်းအရာသည် အမြော်အမြင်ရှိသော ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်စွန့်စားသော ဖန်ဆင်းခြင်း လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၊ ဖန်ဆင်းထားသော အရာတွေက ဒီဇိုင်းနာ၏စီမံချက် အကြံအစည်ကို ဆန့်ကျင်ပါက အရာအားလုံးသည် အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း အခွင့်အရေးကြောင့် ဖန်ဆင်းထားသော အရာများက ဒီဇိုင်းနာအား လျစ်လျူရှုခြင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ဤဒီဇိုင်းနာ၏ ပုံပန်း သဏ္ဍာန်ကို ရရှိပြီလား။ ထိုသူသည် သင့်အားစိတ်ဝင်စားမလား။ သို့မဟုတ် သင်သည် သူထုတ်လုပ်သော အရာများစွာထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဘဲလား။ သင့်အား ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် သူ၏ စီမံချက်အကြံအစည်သည် ဘာများဖြစ်မလဲ။
ထိုသူ၏စီမံချက်အကြံအစည်ကို သင်သဘောပေါက်နားလည်ပါသလား။ သင်သည် ထိုစီမံချက် ၌ပါဝင်သည်ဟု ယူဆကာ ပြုမူနေထိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ် သင်သည် လူ့ဘဝအသက်တာ ၌ အကောင်းဆုံးဟု ယူဆသောအရာများကိုပဲ လုပ်ဆောင်နေပါသလား။
ဤမေးခွန်းများကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အလိုရှိပါသလား။
ဒီဇိုင်းနာသည် သူ၏ဒီဇိုင်းများ၌ ပါဝင်ပတ်သက်နေသေးသလား။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက
သင်ဘယ်လို သိရှိနားလည် နိုင်မလဲ။
•ဖန်ဆင်းထားသော အရာများ၏နောက်ကွယ်မှာ ပို၍ကြီးမားသော စီမံချက်အကြံအစည် ရှိပါမလား။
•သူ၏ပို၍ကြီးမားသော စီမံချက်အကြံအစည်နှင့် သင်သည်ကိုက်ညီပါ့မယ်လား
ဤအရာကို ယနေ့စဉ်းစားပြီး ကျေးဇူးပြု၍ နေ့ ၄ ၌လာပါ!द
တစ်နေ့လျှင် 04 ကိုဆက်လက်
© 2019 এক সপ্তাহ ভাবুন
ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ သင်ဤ site ကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းယူဆပါလိမ့်မယ်။OK